Löfven oo banllaan qaaday in bar la dhimo shaqo la'aanta dalka ka aloosan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Löfven oo banllaan qaaday in bar la dhimo shaqo la'aanta dalka ka aloosan
La daabacay torsdag 4 april 2013 kl 09.18
Xisaab is-daba-marinta waxaan u deeyney dawladda
Shir-weynihii uga furmay maalintii arbacada magaalada Göteborg xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga oo uu furitaankiisii ka hadlay hogaamiyaha xisbiga Stefan Löfven ayuu ballaan ku qaaday in xisbigiisu haddii uu ku guuleeysto hanashada hoggaanka dalka ee doorashada dayrta ee sannadka foodda innagu soo haysa uu muddo lix sannadood gudahood sannadka 2020 uu gaarsiin doono heerka shaqa-la'aan ee dalka midda ugu hooseeysa ee waddammada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub ee EU.
- Waxaan gaarsiin doonnaa goolka ah heerka shaqa-la'aan ee ugu hooseeya waddammada ku bahoobay EU-da, waa qayb ka mid ah goolashayada, annaga oo weliba ku jiheeysan in laga madax-bannaanaado shaqa-la'aanta. Waa middaa siyaasadda xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga.
Dalka Iswiidhen ayaa maanta ku sugan shaqa-la'aan gaarsiisan 8,2%, halka dalka Awstriya, ahna waddanka ugu hooseeya ee shaqa-la'aanta ee waddammada EU-da ay ka jirto shaqa-la'aan gaarsiisan 4,8%. Goolka uu ku dhawaaqay hogaamiyaha xisbiga, Stefan Löfven ee sannadka 2020 uu yahay sidii lagu dhimi lahaa bar shaqa-la'aanta dalkan ka aloosan. Hase yeeshee sidii goolkaa lagu gaari lahaa waxaa loo baahan yahay dadyoow inta maanta ka badan iyo saacado ka badan oo la howl-galo, sida uu sheegay Stefan Löfven.
- Ma ahan mid aan u adkeey-san karno xaaladda maanta dalku ku sugan yahay, dawlad oranaysa "aan bal aragno waxa aan qaban doonno xilliga foodda innagu soo haya", balse waa inaan degsanno goolkii aan uga bixi laheyn, xitaa hadduu yahay goolku mid adag.
Xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga ee aad hoggaankiisa hayso ayaa lagu dhaleeceeyaa inuu howl-gab horey u gelin jiray si loo dhimo shaqa-la’aanta, maxaa hor istaagi doona inaad mar kale sidaa u dhaqantaan?
– May, ma ahan middaa hoowlaha aan damac-sannahey inaan ku tallaab-sanno. Midda aan ula jeedno waxay tahay inaan ku dhinno shaqa’la’aanta laba siyaabood. Midda koowaad in dadyoow badan la howl-geliyo iyo midda labaad oo ah in la helo saacado shaqo dheeri ah, middan dambe ayaana saameeyn ku yeelan doonta hadba-nooca adeegga bulshada ee hab-nolol-wanaagga dalka ee suurtagalka dhaqaale aannu u leennahey. Waa hoowlo aan indhaha ku heyn doonno. Arrimmaha la xiriira xisaab is-daba-marinta waa mid aan dawladda maanta jirta u daayay Annagu waxaan ka tallaabbo qaadi doonnaa xisaab dhab ah. Waa gool aad u dhib-badan sidii lagu gaari lahaa, hase yeeshee aan gaari doonno mustaqbalka.
Si loo gaaro goolka ah in aad hoos loogu dhigo heerka shaqa-la’aanta ee xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga waxaa kaloo loo baahan yahay in kor loo soo qaado tayada wax-barasho ee dhallaanka, in la dardar-geliyo howlaha xafiiska shaqada iyo in la hagaajiyo hoowlaha la xiriira isku-beegidda shaqaalaha iyo shaqooyinka bannaan, isla-markaana la hagaajiyo xaaladda shirkadaha.
– Shaqa walba waa muhiim, middase aan ku talo-gal-sannahey waxay tahay inaan ka soo saarno 30 000-ka kun ee ku xaniban nidaamka shaqa-la’aanta ee FAS 3.
Ma waxaad leedahay shaqooyinka dawladdu dhaqaalaha ku taageerto waa kuwo xisaabta lagu dari doono?
– Waa la xisaabin, maadaama ey yihiin shaqooyin dhab ah. Laakiin ulama jeedno inaan xoogga saari doonno oo keliya shaqooyinka ey dawladdu dhaqaalaha ku taageerto, iyo sidoo kale shaqooyinka laga helo shirkadaha mulkida loo leeyahay, kuwa adeegga bulshada, kuwa wax soo-saarka warshadaha iyo shaqooyinka dawladda, sida uu sheegay Stefan Löfven.